कोलकाता रेकर्डलाई लिएर आश्चर्यमा छन् वैकुण्ठ मानन्धर
- कृष्णसिंह लाेथ्याल
सन् १९८७ मा भारतको कोलकातामा वैकुण्ठ मानन्धरले ४२ किलोमिटर दूरी २ घण्टा १५ मिनेट ३ सेकेन्डमा पार गरे । यो उनको दक्षिण एसियाली कीर्तिमान हो । त्यसबेला उनी ३६ वर्षका थिए । अहिले उनी ६९ वर्ष पुगिसके । तर, उनको कीर्तिमान कसैले तोड्न सकेको छैन ।
२००९ सालमा काठमाडौंको कालीमाटीमा जन्मिएका मानन्धरले एथलेटिक्सबाट नेपाललाई थुप्रै अन्तर्राष्ट्रिय पदक दिलाएका छन् । त्यसैले त खेलप्रेमीको मनमा मानन्धरप्रति विशेष सम्मान छ । कतिपयले उनलाई 'हिलोमा फूलेको कमल'को संज्ञासमेत दिने गरेका छन् ।
हुन पनि मानन्धरले खेलाडीप्रति समाजकाे दृष्टिकाेण नै बदलिदिए । उतिबेला खेल र खेलाडीप्रति समाजकाे बुझाइ र हेराइ अत्यन्तै संकुचित थियाे । यसलाई चिरेर उनी दौडिए । कुनै बेला खेलाडीको मूल्य छैन भन्ने समाज नै कालान्तरमा वैकुण्ठको सम्मानमा निहुरियो ।
अनि दाैडिन थाले
सामान्य परिवारमा जन्मिएका मानन्धरको दौडयात्रा २०२७ सालदेखि सुरु भएको थियो । सुरुसुरुमा कतिपय प्रतियोगितामा भाग लिन जाँदा उनी परिवारलाई थाहै दिँदैनथे । 'अलिक चर्चा हुन थालेपछि मात्र हो, मैले परिवारलाई थाहा दिएर प्रतियोगितामा भाग लिन थालेको', उनी सम्झिन्छन्, 'यसरी नै अघि बढियो र यहाँसम्म आइपुगियो ।'
विगत सुनाउँदासुनाउँदै उनी एक्कासि उराठ सुनिन्छन्, 'वृतान्त सुनाएर पनि के गर्नु, सुन्नुपर्नेले सुनिदिँदैन ।' उनकाे इशारा सरकारतिर थियाे । 'आफ्नो खेल जीवनबारे बोल्दाबोल्दा म थाकिसकेँ । संघर्ष, गुनासाे वा भनाैँ सुझाव सरकारले खै मानेकाे ?', उनले प्रश्न गरे ।
पहिलो पटक उनले सन् १९७६ मा क्यानाडाको मोन्ट्रियलमा भएको २२औँ ओलम्पिकमा नेपालको प्रतिनिधित्व गरे । सन् १९८०, १९८४ र १९८८ सम्म नेपालको प्रतिनिधित्व गर्दै चार पटक ओलम्पिक खेले ।
त्यसपछि ओलम्पिकमा नेपालबाट अरू खेलाडीले माैका पाऊन् भन्ठानेर भाग नै लिन छाडेको मानन्धर बताउँछन् । ‘म अझै खेल्न सक्थेँ ओलम्पिक । तर, मपछिका खेलाडीको मनोबल बढाउन आफैँले ओलम्पिकमा भाग लिन छाडिदिएँ,’ उनले सगाैरव सुनाए ।
मानन्धर नेपालको तर्फबाट धरै पटक ओलम्पिकमा भाग लिने कीर्तिमानी खेलाडी हुन् ।
सागमा दोहोरो कीर्तिमान
ओलम्पिक मात्र हाेइन, मानन्धर दक्षिण एसियाली खेलकुद (साग) मा पनि हावी भए । सागमा पनि उनले कीर्तिमान बनाए । सन् १९८३ मा काठमाडौंमा भएको साफ (हाल साग) मा नेपाललाई पहिलो स्वर्ण पदक उनैले दिलाएका हुन् । त्यसपछि सन् १९८३ मै बङ्गलादेशको ढाकामा आयोजित सागमा नेपालका लागि उनले अर्को स्वर्ण जिते । त्यस बेला नेपालले जम्मा एउटा मात्र स्वर्ण जितेकाे थियाे, जुन उनले नै दिलाएका थिए ।
सन् १९८७ मा भारतको काेलकातामा भएको तेस्रो सागमा पनि उनले स्वर्ण पदक जिते । उक्त स्वर्णसँगै साग खेलकुदमा लगातार तेस्रो स्वर्ण जित्ने नेपालका कीर्तिमानी खेलाडी बने उनी ।
त्यति मात्र होइन, उनले स्वर्ण पदक जित्दा निर्धारित दूरी २ घण्टा १५ मिनेट ३ सेकेण्डमा पूरा गरेर अर्को रेकर्ड पनि राखेका थिए । लगातार तीन स्वर्ण पदक जित्ने कीर्तिमान तेक्वान्दोका दीपक विष्टले तोडे पनि २ घण्टा १५ मिनेट ३ सेकेण्डमा पूरा गरेको सागकाे कीर्तिमान भने अझै उनकै नाममा कायम छ ।
राेचक कुरा त के भने, कोलकाताकाे रेकर्डलाई लिएर उनी आफैँ पनि आश्चर्यमा छन् । भन्छन्, 'मैले ३६ वर्ष हुँदा त्याे रेकर्ड राखेकाे थिएँ । हेर्नुस्, ६० वर्षकाे भइसकेँ । तर, पनि रेकर्ड कसैले भङ्ग गर्न सकेकाे छैन । यसले म आफैँ आश्चर्यचकित छु ।'
उक्त कीर्तिमान पनि नेपालका धावकले नै तोडेको हेर्ने चाहना उनकाे छ । ‘मैले काेलकाता सागमा राखेको २ घण्टा १५ मिनेट ३ सेकेण्डको रेकर्ड अहिलेसम्म कुनै पनि देशले तोडेका छैनन् । उक्त रेकर्ड नेपालका कुनै धावकले तोडेको हेर्ने चाहना छ’, मानन्धर भन्छन्, ‘मेरोजस्ताे जमाना अहिले छैन । मैले कोचबिना आफैँ दौडिन सिकेँ । खेलाडीका लागि खानामा डाइट पनि हुँदैन थियाे । अहिले त्यो अवस्था छैन । खेलकुद पनि राम्रो हुँदै गएको छ ।’
यसरी मानन्धरले नेपालको एथ्लेटिक्समा करिब ४१ वर्ष एकछत्र राज गरे । खेलजीवनबाट बिदा लिँदा उनले सन्न्यासकाे घाेषणा गरेनन् । उमेरले अहिले ६९ वर्ष पुगिसकेका मानन्धरकाे जोश उस्तै छ । उक्त जाेश अहिले उनी प्रशिक्षक बनेर खेलाडीतिर सार्ने काम गरिरहेका छन् ।
खेल र खेलाडीप्रति समाजको हेराइमा केही बदलाव आए पनि सरकारी नजर उस्तै पुरातनवादी रहेको उनी बताउँछन् । 'सरकारले खेलक्षेत्रमा काम नै नगरेकोचाहिँ म भन्दिनँ । तर, यसलाई जुन प्राथमिकतामा राख्नुपर्थ्यो, त्योचाहिँ हुन सकेको छैन', उनी भन्छन्, 'खेलक्षेत्रको नेतृत्वमा बुझेका र अनुभवी व्यक्तिलाई छनोट गरिँदैन । खेलाडीको वृत्तिविकासको विषयलाई गम्भीर रूपमा लिइँदैन । यसरी त खेलक्षेत्रको द्रुततर विकास सम्भव नै हुँदैन नि !'
प्रकाशित मिति: शनिबार, पुस २५, २०७७, ०८:०९:००
नेपाली आरोहीले बनाए कीर्तिमान, हिउँदमा पहिलाेपटक केटू हिमालको सफल आरोहण 1 min read